कतै तपाईंको घरको दिशा नमिलेको त छैन ? | Mero Jyotish
घरको कुन दिशाको असन्तुलनले के समस्या हुन्छ ? जान्नुहोस्।
यदि तपाईंको कुंडलीमा चन्द्रमा राम्रो छ भने, तपाईंले आमा र वाहन आदिको खुशी पाउनुहुनेछ। तर यदि घरमा चन्द्रमाको दिशा प्रदूषित छ भने, यो खुसी कम हुनेछ वा यी खुसी प्राप्त हुँदैन, किनकि घरको दिशामा रहेका ग्रहहरूले राम्रो र नराम्रो प्रभाव पार्छन्। जान्नुहोस्, घरको कुन दिशा बिग्रिनाले के समस्या हुन्छ ?
सूर्य पूर्व दिशाको ग्रह हो। घरको ढोका वा विन्डो यस दिशामा हुनुपर्दछ वा खाली राख्नुहोस्। यस दिशाको प्रदूषणका कारण बुबासँग झगडा हुने सम्भावना हुन्छ, सरकारी वा सरकारी कामसँग समस्या हुन्छ, दिमागको कमजोरी, ज्वरो, टाउको दुख्ने, आँखा, मुटु, छाला, क्षय र अस्थिर रोगहरू आदि हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ।
शुक्र ग्रह आग्नेय दिशाको ग्रह हो। यस दिशामा त्यहाँ ग्याँस, बायलर, ट्रान्सफार्मर, भान्छा आदि हुनुपर्छ। यस दिशाको दूषित हुनाले महिला स्त्री सुखमा कमी, सवारीसाधनबाट कष्ट, नपुंसकता, हर्निया, मधुमेह, धातु र मूत्र रोग, गर्भाशय रोगहरू आदि हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ।
मंगल ग्रह दक्षिण दिशामा रहन्छ । यस दिशामा भारी घरेलू सामान राख्नुहोस्। यदि यो दिशा बिग्रेको छ भने घरमालिकले कष्ट भोग्नेछ, भाइहरूको तीतोपन, क्रोध र दुर्घटना बढ्नेछ। रक्तचाप, रक्त विकार, कुष्ठरोग, फोडा, पाइल्स, बिफर, प्लेग आदि रोग हुने सम्भावना रहन्छ।
राहु र केतु ग्रहहरू यस दिशामा रहन्छन्। घरको मुख्य ब्यक्तिको कोठा, ढुकुटी, मेशिनहरू आदि यस दिशामा राख्न सकिन्छ। यस दिशाको दूषितताका कारण परिवारमा अकाल मृत्यु हुने सम्भावना हुन्छ, हजुरबुबा वा बुवाबाट समस्या, भूत प्रेतको डर, छाला, कुष्ठरोग, रगत विकार, हैजा, छाला रोग आदि हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ।
राम्रो पारिवारिक सम्बन्धको वास्तु सम्बन्धि सुझाव
शनि पश्चिम दिशासँग सम्बन्धित छ। यस दिशामा भान्छा वा शौचालय हुनु पर्छ। यदि पश्चिम दिशामा कुनै दोष छ भने, त्यहाँ काममा गडबडी, वायु विकार, पक्षाघात, मेरुदण्डमा समस्या, भूतको डर, क्यान्सर, कुष्ठ रोग, नपुंसकता, खुट्टामा समस्या आदि सम्भावना हुन्छ।
यस दिशा चन्द्र ग्रहसँग सम्बन्धित छ। तपाईंको बेडरूम, ग्यारेज, गोठ, आदि यस दिशामा हुनु पर्दछ। यस दिशाको प्रदूषणका कारण, आमाको सम्बन्धमा तीतोपन, मानसिक समस्या, अनिद्रा, दम, श्वास रोग, कफ, सर्दी, मूत्र रोग, मासिक रोग, पित्ताशय, निमोनिया आदि हुने सम्भावना हुन्छ।
बुध उत्तर दिशासँग सम्बन्धित छ। यस दिशामा झ्याल, ढोका, घरको बाल्कनी वा मुख्य ढोका हुनुपर्दछ। यस दिशामा दोष हुनको कारण, त्यहाँ ज्ञान र बुद्धिको हानी हुने, बोली दोष, भुल्ने बानी हुने, मिर्गी, दिमाग, घाँटी वा नाक आदि रोग, भ्रम, व्यवसाय गुमाउनु, धेरै शंका हुने, मामा काका आदिसँग सम्बन्ध मा तीतोपन आदि हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ ।
बृहस्पति यस दिशासँग सम्बन्धित ग्रह हो। यस दिशामा, बोरिंग, इनार, पौंडी पोखरी, मन्दिर वा घर मुख्य ढोका हुनुपर्दछ। यदि यो दिशा बिग्रिएको छ भने पूजापाठ, भगवान र गुरुहरूमा विश्वासको कमी, आयमा कमी, सम्पत्तिमा कमी, विवाहमा ढिलाइ, बच्चा हुनमा ढिलाइ, बेहोशी, पेटको विकार, कानको रोग, गठिया, कब्ज, अनिद्रा आदि हुने सम्भावना छ।